China abicah Coasters mveliso kunye nabenzi | SJJ
Imigangatho egudileyo yeetafile, itafile yebha ephezulu okanye itreyi ihlala isenza ubomi bethu babunamhlanje kunye nesitayile, ii-coasters ze-silicone zifezekile ukukhusela iitafile zakho, i-bar counter top kunye netreyi kubushushu kunye nokufuma. Kwaye ii-coasters ze-silicone zibambe iipleyiti, iikomityi, izitya kunye nokusika ngesiseko esiqinileyo, esikhuselekileyo nesingatyibilikiyo ...
Imigangatho egudileyo yeetafile, itafile yebha ephezulu okanye itreyi ihlala isenza ubomi bethu babunamhlanje kunye nesitayile, ii-coasters ze-silicone zifezekile ukukhusela iitafile zakho, i-bar counter top kunye netreyi kubushushu kunye nokufuma. Kwaye ii-coaster ze-silicone zibambe iipleyiti, iikomityi, izitya kunye nokusika ngesiseko esiqinileyo, esikhuselekileyo nesingatyibilikiyo. Ii-coasters ze-silicone zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-silicone ezinobungane, ezendalo kunye nezingeyongozi. Izinto zithambile kwaye zihlala ixesha elide, iilogo zinemibala kwaye ziqaqambile, ke ii-coaster ze-silicone zinokusetyenziswa naphi na njengezipho zentengiso, izipho zeshishini okanye injongo yabanye. Iimilo eziqhelekileyo zingqukuva kwaye isikwere, kodwa iqela lethu leengcali lingenza iimilo ngokoyilo lwakho, kwaye imibala inokwenziwa ibenakho. Ii-coasters ze-silicone zichaza kakuhle ezona zimvo ziphambili kunye neengcinga ezivela kubaqulunqi, umbutho okanye abaxhasi bengxowa mali.
Izinto eziphathekayo: i-silicone ekumgangatho ophezulu, ithambile, inobuhlobo kwaye ayinabungozi
Designs: 2D, iilogo 3D kwicala elinye okanye omabini amacala, Iimilo ungenziwa ngemfuneko
Ubukhulu: malunga ne-90/100 mm / i-120 mm, okanye yenziwe ngokwezifiso
Imibala: Ingadibanisa imibala yePMS, okanye isekwe kwimfuno yakho.
IiLogo: IiLogo zingaprintwa, zibhalwe nge-emboss, zilahlwe, zigcwaliswe ngombala kunye nezinye
Ukuncamathisela: Akukho zincamathiselo okanye ulandele umyalelo wakho
Ukupakisha: 1 pc / ibhegi poly, okanye ulandele umyalelo wakho
MOQ: iiPC ezingama-200
Egqithileyo Ukuvaleka kwesiciko seNdebe yeSilicone
Okulandelayo: Abaphathi beKhadi leSilicone
Ipeni yeKhathuni ekroliweyo
Ukulungisa okushushu Imisonto yenkomo
Isixhobo seqhwa sezixhobo ezininzi